के तपाइकाे आँखा कमजाेर छ ? छ भने यस्ता खानेकुरा खानुस् - ज्ञानविज्ञान
हिजोआज हरेकजसो घरका एक न एक सदस्य चस्मा लगाउनुपर्ने वाध्यतामा हुन्छन् । कसैमा टाढाका बस्तु नदेख्ने त कसैलाई नजिकको बस्तु खुट्याउन नसक्ने समस्या हुन्छ । यस्तो समस्या कसैले जन्मजात लिएर आउछन् भने कसैलाई विभिन्न परिस्थितीबस हुने गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा सामन्य दिनचर्या कठिन बन्छ । खान, बस्न, हिँड्न, पढ्न, हेर्न, काम गर्न असहज हुन्छ । त्यसैले आँखाप्रति हामी सर्तक र संवेदनसिल हुनैपर्छ ।
आँखामा धेरैखाले समस्या हुन्छन् । कसैले जन्मजात दृष्टि गुमाएका हुन्छन् । कसैको विभिन्न संक्रमणले आँखाको ज्योति हराउन सक्छ । आँखा सम्बन्धीका समस्याहरुको सहि उपचारको अभावमा दृष्टि गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ ।
शक्तिशाली प्रकाशमा निरन्तर पढ्ने, लेख्ने, निरन्तर कम्प्युटर वा मोवाइल हेर्ने, हावामा हानिकारक प्रदूषणको सम्पर्कमा आउनु, पाचन विकार, अन्तुलित खानपान, भिटामिन ए को कमी जस्ता कुरा कमजोर दृष्टिका लागि जिम्मेवार हुन्छ । मदिराको सेवनले पनि आँखामा समस्या निम्त्याउँछ ।
– धनियाको तीन भागका साथ एक भाग चिनीको मिश्रण तयार गर्ने । यसलाई पिसेर पानीमा उमाल्ने, एक घण्टा त्यतिकै राख्ने । एक सफा कपडाले छानेर उक्त रस पिउनुपर्छ ।
मोवाइल, ल्यापटपले बालबालिकाको आँखा कसरी कमजोर हुँदैछ ? प्रा. डा. सविना श्रेष्ठको लेख
अहिले धेरैजसो बालबालिका चस्मा पहिरिएका देखिन्छन् । आँखा चिम्लेर मनन गर्नुहोस् त, हिजोको पुस्ताले यतिविध्न चस्मा लगाएका थिए र रु पक्कै थिएनन् । भन्नुहोला, त्यसबेला चस्मै कहाँ पाइन्थ्यो र रु
कुरा त्यसो होइन । हिजो दिनमा भन्दा आजको दिनमा हामीले आँखाको दृष्टि गुमाइरहेका छौं । हाम्रो आँखा प्रतिदिन कमजोर हुँदैछ । र, यसको सबैभन्दा बढी असर त साना बालबालिकामा परेको छ, जो बिहान उठ्नसाथ मोवाइल, ल्यापटप, कम्प्युटरमा तल्लिन हुन्छन् ।
भिडियो गेम, मोबाइल तथा कम्प्युटर लगायतका आधुनिक ग्याजेटको प्रयोगका कारण बालबालिकामा दृष्टि दोष ९रिफ्राक्टिभ एरर० को समस्या धेरै हुने गरेको छ । दृष्टि दोषको उपचार समयमै नगरेको खण्डमा यसका कारण आँखा विग्रने सम्भावना धेरै हुने गर्दछ ।
सामान्यतया दृष्टि दोष दुई प्रकारका हुन्छन् । नजिकको दृष्टि दोष जसलाई हामी मायोपिया भन्ने गर्छौ । त्यस्तै, अर्को दोष भनेको टाढाको दृष्टि दोष हो । जसलाई चिकित्सकीय भाषामा हाइपरमेट्रोपिया पनि भन्ने गरिन्छ ।
दृष्टि दोषमध्य पनि आजकल बालबालिकाहरुमा नजिकको दृष्टिदोष ९मायोपिया० को समस्या धेरै हुने गरेको छ । भिडियो गेम, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन लगायतको प्रयोगका कारण बालबालिकामा नजिकको दृष्टि दोषको समस्या गम्भीर भएको पाइएको छ ।
नेपाल नेत्रज्योती संघले नेपालमै गरेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुले पनि यहाँका निजी स्कुलमा अध्ययनरत बालबालिकाहरुमा मायोपियाको समस्या धेरै भएको पाइएको छ ।
के हो मायोपिया ?
मायोपिया आँखा सम्बन्धि आम समस्या हो । मायोपिया भएमा व्यक्तिले टाढाको वस्तु धमिलो देख्ने गर्दछ । कुनै पनि वस्तुलाई टाढाबाट हेर्दा उक्त वस्तु हाम्रो आँखाको दृष्टि पर्दा अर्थात रेटिनामा आएर फोकस हुने गर्छ । तर मायोपिया भएमा उक्त वस्तु आँखाको दृष्टि पर्दा भन्दा अगाडीको भागमा फोकस भएको कारण दृष्टि धमिलो हुने गर्छ ।
मायोपियाको समस्या विभिन्न कारणले हुनसक्छ । कुनै बालबालिकामा जन्मजातै मायोपियो समस्या हुनसक्छ । त्यस्तै, कम्प्युटर, मोबाइल तथा भिडियो गेममा धेरै समय विताउने बालबालिकामा पनि मायोपियाको समस्या हुने गर्दछ ।
परिवारमा कसैलाई दृष्टि दोष भएमा उसबाट जन्मने बालबालिकामा पनि दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया हुने सम्भावना धेरै हुने गर्छ । त्यस्तै, धेरै किताब हेर्ने बालबालिकामा पनि मायोपिया हुने सम्भावना उच्च हुने गर्दछ ।त्यस्तै, जन्मजातै आँखा टेढो हुने बालबालिकामा पनि मायोपिया हुने सम्भावना धेरै हुने गर्दछ ।मायोपिया भएमा यस्ता लक्षण देखा पर्छ ।
टाढाको वस्तु धमिलो देखिने
कुनै पनि वस्तुलाई प्रस्ट रुपमा हेर्नका लागि टेढो हेर्नु वा आँखा चिम्लने
आँखामा परेको अत्याधिक दवावका कारण टाउको दुख्ने
टाढाको वस्तु हेर्नमा कठिनाई महसुस हुने
वोर्डमा लेखिएको कुरा प्रस्ट नदेखिने
दृष्टि धमिलो भएमा आँखामा चश्मा लगाएर यसको उपचार गर्नु पर्दछ । चश्मा लगाएको खण्डमा बच्चाले राम्ररी आँखा देख्न सक्दछ । यो हामीले सुरुका केही बर्षहरुमा गर्नुपर्छ । जस्तै, बच्चा आठ वर्षको भएदेखि नै आँखाको दृष्टि दोषको उपचार गर्न सकेको खण्डमा आँखा अल्छी हुँदैन । अर्थात ुलेजी आईु वा ुएम्लायोपियाु हुँदैन । किनकी दृष्टि दोष हुनुमा अल्छी आँखा ९ लेजी आई० तथा एम्लायोपिया ९टेढो आँखा० पनि प्रमुख कारण हो ।
त्यही भएर यदी बच्चामा दृष्टी दोष बाहेक पनि आँखा टेढो हुने समस्या छ भने त्यसलाई समयमा नै उपचार गर्नु पर्दछ । टेढो आँखालाई शल्यक्रियाद्धारा सोझो बनाउन सकिन्छ ।
तर नेपालमा के छ भने जब बच्चा टेढो आँखा लिएर जन्मिन्छ, तब उसलाई भग्यमानीको दर्जा दिइन्छ । उसको अपरेशन गराउन अभिभावकहरु मान्दैनन् । तर टेढो आँखाका कारण पछि गएर उसको जीवनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने जानकारी अभिभावकलाई हुँदैन । त्यही भएर पनि टेढो आँखालाई समय छँदै उपचार गरेर त्यसलाई सोझो बनाएर नदेख्ने आँखालाई देख्ने बनाउनु पर्दछ । यो हाम्रो जिम्मेवारी हो ।
मायोपिया हुनबाट बच्चाहरुलाई जोगाउने एउटै मात्र उपाय भनेको मोबाइल तथा कम्प्यूटरको प्रयोग कम गर्नु हो । मोबाइलमा घण्टौ गेम खेल्ने बानीलाई कम गरेर पनि बालबालिकामा गम्भीर समस्याको रुपमा देखा पर्दै गएको मायोपिया रोगलाई कम गर्न सकिन्छ ।
Don't Miss it टाउकाे दुखेकाे ठिक पार्न अपनाउनुहाेस् यी उपायहरू
Up Next जान्नुहाेस् यस्ताे खानेकुरा शरिरकाे लागी हानिकारक छ ? जसले मृत्युकाे मुखमा पुर्याउन सक्छ
भाइरल ज्वराे के हाे ? कसरी बच्ने भाइरल ज्वराेबाट जान्नुहाेस्
भाइरल ज्वरो मानिसको रगतमा भाइरसको संक्रमण भएपछि आउने गर्छ । श्वासप्रश्वासको बेलामा नाकबाट घाटी हुदै फोक्सोसम्म पुग्ने भाइसरले फोक्सोमा इन्फेक्सन…